Fampiharana Android tsara indrindra hijerena fahitalavitra maimaim-poana | Vaovao momba ny gadget
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Android
Eder Esteban | | fampiharana
Ny findaintsika Android dia ampiasaina amin'ny zavatra maro, indrindra raha ny momba ny fandaniana atiny multimedia ao aminy. Mihevitra izany fa afaka isika ampiasao koa ny mijery tele ao. Izy io dia zavatra azontsika atao amin'ny fotoana rehetra, raha mampiasa rindrambaiko ahafahana manao izany isika. Soa ihany fa malalaka ny fisafidianana ny rindranasa amin'ity sehatra ity.
Avelanay ho anao ny tsara indrindra fampiharana izay hijerena fahitalavitra maimaim-poana amin'ny telefaona Android. Misaotra azy ireo fa tsy mila misintona ny fampiharana apetraka amin'ny findainao fotsiny ianao ary afaka mankafy ireo atiny ireo amin'ny fomba tsara indrindra.
1 Ianao TV Player
2 Mpilalao MegaTV
5 Mpilalao Atresmedia
7 Ahoana ny fomba hananana ireo rindranasa ireo amin'ny Android
Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko malaza indrindra azontsika sintonina amin'ny telefaona Android na takelaka. Misaotra amin'izany fa hanana fantsom-pahitalavitra an'arivony maro isika, hahafahantsika manjifa amin'ny streaming amin'ny findaintsika, afaka mahita azy ireo mivantana amin'ny fotoana rehetra. Ny zavatra tsara momba ilay rindranasa dia ny fandefasana azy ao anaty lavorary, mba hahafahantsika mahita azy ireo, miankina amin'ny sokajy tiantsika ho hita.
Ankoatry ny famelana anay hahita ny atiny voalaza dia manana ny mety hampiasa azy io ho toy ny mpilalao haino aman-jery, ary misy forum sy chat ao anatiny mihitsy aza, izay handraisana anjara sy hifandraisana amin'ireo mpampiasa hafa izay mampiasa ilay rindranasa amin'ny telefaona Android na takelaka misy azy.
Fampiharana iray hafa izay hanome antsika fidirana amin'ny fantsom-pahitalavitra marobe, sady misokatra no mandoa vola. Noho izany dia afaka mijery andian-dahatsoratra, fandaharana, horonantsary fanadihadiana na sarimihetsika marobe amin'ny finday Android isika isaky ny maniry izany. Ny fisafidianana ny atiny sy ny fantsona dia malalaka, midika izany fa misy zavatra foana amin'ny tsiron'ny tsirairay ao anatin'ity rindrambaiko ity, izay azontsika alaina maimaimpoana.
Ny atiny rehetra ao anatin'ny fampiharana Voalamina ho sokajy izy ireo, izay manamora kokoa ny fitadiavana azy ireo. Tsotra noho izany ny fitetezana, noho izy manana interface tsotra somary tsotra ampiasaina, izay tsy isalasalana fa tena ahazoana aina tokoa amin'ity lafiny ity. Misy dokam-barotra ao, izay mety hahasosotra indraindray, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny fotoana filalaovana ireo atiny ireo amin'ny telefaona Android anao.
Fampiharana iray izay azontsika atao ihany koa ny misintona amin'ny Android nefa tsy mila mandoa vola dia ny RTVE a la carte. Fampiharana ahafahantsika miditra karazana atiny rehetra amin'ny fahitalavitra ampahibemaso Espaniola Izy io dia serivisy iray izay nanam-bola be nandritra ny fotoana ela, noho izany dia fampiharana mora ampiasaina, izay ahitanay manana atiny maro isan-karazany koa. Asa tsara no vita tamin'ity sehatra ity, miaraka amin'ny karazana andian-tantara sy programa misy.
Izy io dia fampiharana tanteraka, satria tsy mandoa ny fampidinana azy izahay, ary koa tsy manana fividianana ao anatiny. Ho fanampin'izay, tsy misy dokam-barotra na ao anatiny, noho izany izahay dia mifantoka amin'ny fahitana ny atiny toy izany amin'ny Android. Raha manana Chromecast izahay dia afaka mandefa ny atiny amin'ny alalàn'izany ary mijery azy ireo toy izany amin'ny fahita lavitra. Safidy tsara hafa amin'ity lafiny ity, izay tena mora ampiasaina ihany koa.
Ity rindranasa ity dia amin'ny teny anglisy, saingy azontsika atao ny mampiasa azy io tsy misy olana be loatra amin'ny telefaona Android na takelaka misy antsika. Misaotra azy afaka mampiasa fantsona fahitalavitra 150 eo ho eo izahay, afaka mahita azy rehetra amin'ny finday nefa tsy mila mandoa vola ho azy ireo. Ny fisafidianana atiny dia malalaka, miaraka amina andian-tantara maro. Misy fantsona isan-karazany, ho an'ny mpihaino rehetra, amin'ity fampiharana ity. Ka ho mora ny mahita zavatra tadiavinao.
Manana interface mora ampiasaina izy io, satria ny atiny dia nalamina ho sokajy ao aminy, nahatonga azy ho tena tsotra ny fitetezana azy. Ho fanampin'izay, manana tombony lehibe izy fa tsy manana doka, indrindra satria maro amin'ireo rindranasa ireo hijerena fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Android no manana doka na doka maro ho an'ny olon-dehibe. Tsy misy na inona na inona amin'io heviny io, mamela ny fivezivezena milamina sy tsotra amin'ny telefaona amin'ny fotoana rehetra. Lafiny iray hafa izay tena ilaina amin'ny mpampiasa.
Fampiharana iray hafa izay mandrakotra vondrona iray, amin'ity tranga ity Atresmedia, izay misy fantsona toy ny Antena 3, La Sexta, Nova, mega, A3Series, Neox. Ka amin'ity fampiharana Android ity dia ahitantsika lisitra atiny midadasika, avy amin'ireo fantsona rehetra ireo, na ny andian-dahatsoratra na ny andiany naely aminy, mieritreritra andian-tantara vahiny. Na dia eo amin'ny andiany vahiny aza dia mety tsy hanana ny toko rehetra ao amin'ny fangatahana foana izy ireo.
Izy io dia rindranasa mora ampiasaina, izay misy interface tsy manome olana be loatra amintsika, mamela azy ho mora ny mahita ny atiny voalaza amin'ny fotoana rehetra. Afaka mahita votoaty mivantana mitovy amin'izany ihany koa isika, na atiny izay efa nalefa. Ho fanampin'izay, mandefa ny atiny manokana alefany amin'ity sehatra ity ihany koa izy ireo. Azontsika atao koa ny mampiasa azy amin'ny Chromecast amin'ny telefaona Android.
Fampiharana tsara hafa ho an'ny Android, izay azontsika sintonina maimaim-poana, hiditra amin'ny fantsom-pahitalavitra nefa tsy mila mandoa vola ho azy ireo. Amin'ity tranga ity, rehefa miditra amin'ny fampiharana isika dia efa afaka misafidy izay tiana ho hita, raha mila fantsom-pahitalavitra any Espana isika, raha mitady horonantsary sy andian-tantara na te-hijery fanatanjahantena. Azontsika atao koa ny misafidy amin'ny fotoana rehetra ny karazana atiny averina averina amin'ny alalany.
Izy io dia tena mora ampiasaina fampiharana, na dia tsy ny tsara indrindra amin'ny rehetra aza ny famolavolana, saingy tsy mampiseho olana amin'ny fampiasana azy io, izay zavatra manan-danja amin'ity tranga ity. Noho izany, fampiharana tsara ho an'ny Android izy io, izay ahazoana miditra maimaim-poana amin'ireo fantsom-pahitalavitra ireo.
Ahoana ny fomba hananana ireo rindranasa ireo amin'ny Android
Raha te hanana ny tsara indrindra Fampiharana hijerena fahitalavitra azonao atao eto, aiza no ahitantsika a fisafidianana fampiharana lehibe hijerena fahitalavitra maimaim-poana avy amin'ny telefaona. Noho izany dia afaka mahita ireo rindranasa ireo ianao ary maro hafa koa ao amin'ity tranonkala ity.
Ho mora amin'ity fomba ity ny fahazoana miditra amin'izy rehetra ary tadiavo ireo rindranasa mifanaraka amin'ny tadiaviny, ireo no notondroinay na vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Ny fampiharana tsara indrindra hijerena fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Android
Ahoana ny fanesorana ny nomeraon-telefaoninao amin'ny Facebook
Ny taranaka vaovao an'ny fampiharana IKEA Place dia efa misy izao